Rutsigiro rwehurumende rwakakosha kune zvibodzwa zvitsva zvekabhoni-neutral
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Rutsigiro rwehurumende rwakakosha kune zvibodzwa zvitsva zvekabhoni-neutral
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Rutsigiro rwehurumende rwakakosha kune zvibodzwa zvitsva zvekabhoni-neutral.
Hurumende pasi rose dziri kutatarika kuti dzive nezvinangwa zvikuru zvekudzikisa carbon. Zvisinei, kushaikwa kwezvirongwa zvakasimba kuti izvi zvichaitwa sei kana kuti mari iripo inooneka.
Kushaikwa kwerutsigiro rwehurumende kundege kuri pachena, uye mari yakawanda inodiwa.
Kusundidzira kweUK kuti nyika dzibatane ne 'International Aviation Climate Ambition Coalition' yakaziviswa paCOP26 haina kukwana.
SAF ichave yakanaka kumira kwendege kudzikisa kuburitswa nepo sarudzo dzenguva refu dzemagetsi dzichitariswa.
Ndege uye indasitiri yakafararira yendege ichanetsekana kusangana neambitious carbon neutral targets chete. Hurumende dzinofanirwa kuita nekupa zvakakosha mari inotevera COP26 kuve nechokwadi kuti chiito chine musoro chinoitika.
COP26 yaisa dzvinyiriro kuindasitiri yezvendege kuti isimbise kuzvipira kwayo mukuderedza kukanganiswa kwayo kwezvakatipoteredza. Imwe nguva ichangoburwa yakawana kuti makumi mana neshanu muzana evakapindura pasi rose vakataura kuti nharaunda ndiyo yakanyanya kukosha yeEnvironment, Social, and Governance (ESG) zvinhu zvine chekuita nehupfumi.
Nekunetseka kwezvakatipoteredza kuve kwakakosha kune vatengi, iyo indasitiri inofanirwa kuita. Kunyangwe zvirongwa zvakawanda, mapoka anoshanda, uye zviziviso zvakaziviswa pamberi pemusangano weCOP26, hazvizove zvakakwana chete kuderedza kuburitswa kweindasitiri uye kugadzira shanduko ine musoro. Kushaikwa kwerutsigiro rwehurumende kundege kunooneka, uye mari inodiwa.
Hurumende dzakatsigira kuda kwemamwe mapato kuti ave neushamwari hwezvakatipoteredza. Semuyenzaniso, vagadziri vemotokari vakagamuchira kutsigirwa kwakapararira uye kurudziro yekuchinjira kukugadzira mota dzemagetsi, asi indasitiri yezvendege haina kugamuchira kutariswa kwakafanana kana kudyara.
Hurumende pasi rose dziri kutatarika kuti dzive nezvinangwa zvikuru zvekudzikisa carbon. Zvisinei, kushaikwa kwezvirongwa zvakasimba kuti izvi zvichaitwa sei kana kuti mari iripo inooneka. The UKKusundidzira kuti nyika dzibatane ne 'International Aviation Climate Ambition Coalition' yakaziviswa paCOP26 haina kukwana.